Ny Xiaomi Mi Band 3 dia mahazo famandrihana 640.000 any Sina | Androidsis
Eder Ferreño | | Android Android, SmartWatch, Xiaomi
Herinandro lasa izay dia nikarakara hetsika iray i Xiaomi izay nandaozanay vaovao be dia be izahay. Eo anelanelan'izy ireo hitantsika ny Xiaomi Mi Band 3, ny taranaka vaovao bracelet an'ny marika sinoa. Ny tsenan'ny Wearables dia tsara indrindra amin'ny marika, ka antenain'izy ireo ny hamerina ny fahombiazana amin'ity modely vaovao ity. Ary amin'izao fotoana izao, toa efa an-dàlana mankany izy ireo.
Hatramin'izao dia ankalazana ny fivarotana voalohany an'ity Xiaomi Mi Band 3 any Shina ity. Saingy hatreto, alohan'ny hanombohana ity fivarotana ity, efa misy famandrihana 640.000 amin'ny bracelet. Tao anatin'ny herinandro latsaka taorian'ny nanambarana azy tamin'ny fomba ofisialy.
Mazava io tarehimarika io misy fahalianana sy fangatahana lehibe amin'ny bracelet marika sinoa. Na dia tsy midika aza izany fa hamidy amin'ity fivarotana ity ny isan'ny singa. Fa hazavao tsara fa ny Xiaomi Mi Band 3 dia hamidy avy hatrany raha vantany vao mivoaka anio.
Fiovana natao tamin'ny famolavolana sy ny sasany amin'ireo fiasa, nampiana amin'ny vidiny ambany amin'ny fehin-tànana, ataovy vokatra mamokatra liana be io. Ka ny zava-drehetra dia manondro fa hivarotra ary koa ny taranaka roa teo aloha. Fahombiazana vaovao ho an'ny marika.
Amin'izao fotoana izao, toa tsy ho any Sina ihany no misy ny Xiaomi Mi Band 3. Farafaharatsiny, amin'izao andro izao, hatramin'ny marika mbola tsy nanambara ny daty hamoahana azy any amin'ny firenen-kafa. Fantatray fa havoaka izy io, saingy tsy manana daty hanaovana izany izahay. Tsy nisy voalaza momba an'io. Raha namandrika iray any Shina ianao dia mila miditra ao Mi Band 3 amin'ny teny espaniola.
Ka lIreo mpampiasa any Eropa izay liana amin'ny Xiaomi Mi Band 3 dia tsy maintsy miandry fotoana ahafahana manao azy. Azo inoana kokoa fa ho fantatra tsy ho ela ny daty famoahana azy. Hihaino tsara isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Xiaomi Mi Band 3 dia natokana in-640.000 XNUMX tany Sina
Ny OPPO Find X dia haseho amin'ny 19 Jona ao Paris